Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်မှတ်ကောက်ခံစုဆောင်းခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်မှတ်ကောက်ခံစုဆောင်းခြင်း
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေသည့် သူရဦးတင်ဦးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နအဖ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း၌ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံနေရသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျီုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် NLD(LA)JB မှ ဦးဆောင်၍ ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများထံမှ လက်မှတ်ကောက်ခံစုဆောင်းခြင်း လှုပ်ရှားမှုအား (၁၇-၀၅-၂၀၀၉)နေ့လည်၁နာရီမှ ညနေ ၄နာရီအထိ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ ဟာရာဂျူကု ဘူတာ အနီး ဟာရာဂျူကု ပန်းခြံရှေ့ တွင်ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ လက်မှတ်ပေါင်း ၁၄၉၀ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၃ဝ ဒီပဲယင်း (၆) နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် ကိ...
ဒီပဲယင်း (၆) နှစ်ပြည့်သတင်းများ
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ် ပြည့်် ၀မ...
ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်...
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ် ပြည့်် ၀မ်း...
NLD မေ ၂၈ ၂၀၀၉ ကျေညာချက်
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်ပွဲ ၁၉ နှစ်ပ...
မစ္စတာယက်တောက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ခဲ့ကြေ...
၁၉ နှစ်မြောက် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသည့် အထိမ်းအမှတ်...
Support for Suu Kyi release
24.5.2009 let aung san suu kyi free part 2
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် လစ်လပ်နေတဲ့ တနေရာ (သို့မဟု...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် (National League fo...
25-05-2009 NLD(HQ) office မှ ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ သတင်းစာလ...
MoeMaKa DailyeNewspaper - 25th May 2009
Praying for Daw Aung San Suu Kyi at Singapore Toa ...
NLD ၏ မေ ၂၀ ရက် ကျေညာချက်
ကိုမင်းကိုနိုင် လူ့အခွင့်အရေးဆုရရှိသော ဂွမ်ဂျူးမြိ...
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဂွမ်ဂျူးလူ့အခွင့်အရေး...
ဦးဥာဏ်ဝင်း NLD ၁၉ ၀၅ ၂၀၀၉ နေ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်...
Thousands protest for Suu Kyi
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် နိုင်ငံရေ...
အင်းစိန်ထောင်အနီးတဝိုက် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ပြည...
မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ပိတ်ဆို့မူ အမေရိကန် နောက်ထပ် သက...
FREE DAW AUNG SAN SU KYI DEMO IN TOKYO
Myanmar opposition leader charged - 14 May 2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်အထူးတရားရုံးသို့ ခေါ်...
Daw Aung San Su Kyi Urgent Release (05!14!2009) Gl...
John Willam Yattaw ကို US ဒုအတွင်းဝန်နဲ့ တွေဆုံခွင...
John William Yettaw ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း...(Brief biogr...
NLD ကြေငြာချက် & DASSK's New
နာမည်ကျော် ဂျပန်အဆိုတော်များမှ နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ဂီတေ...
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၇၁)လ ပြည့်် ၀မ်း...
မုန်တိုင်းဘေး ကူညီသူများကို အပြစ်ပေးခြင်းမှာမတရားေ...
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ အား မတရား အ သင်း...
MAYDAY JAPAN 2009 ဂျပန် နိုင်ငံ အလုပ်သမားနေ့ ချီင်္...
ဗ.က.သ ကဂုဏ်ပြုတဲ့ ဂွမ်ဂျူးလူ့အခွင့်အရေးဆုရှင် ကိုမ...